गलत कार्यमा लागेको श्रीमानलाई ठिक पार्ने यस्तो छ डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव
गलत कार्यमा लागेको श्रीमानलाई ठिक पार्ने डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव
डिसेम्बर 19, 2018 डिसेम्बर 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments परिवार, श्रीमति, श्रीमान
आजकाल कतिपय परिवारमा शान्ति नहुने दैनिक झगडा हुने जस्ता समस्या आई रहेको देख्न र सुन्न सकिन्छ । यदि यो समस्या छ भने तान्त्रीक उपचार गराउनुहोस् निको हुन्छ । यो एकजना बाबाले बताउनु भएको थियो मैले पाठकको फाइदाको लागी यहाँ पस्कन गइरहेको छु ।
जब घरमा अशान्ति थाल्दछ त्यहाँ प्रगतिमा पनि बाधक हुन थाल्दछ । अशान्ति २ प्रकारको हुन्छ । एउटा घरमा परिवार हुदाहुदै बाहिर चर्न हिड्ने अर्को परिवारसंग दैनिक झै झगडा गर्ने गलत संगतमा फसेर घरमा अशान्ति मचाउने दुवै घरको प्रगतिको बाधक हुन् ।
श्रीमतिको कर्तव्य भनेको परिवारलाई मिलाउनु हुन्छ तर लाख कोशिश गर्दा पनि कतिपय परिवारमा यो समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्या देखिएमा तल दिएको तान्त्रीक प्रयोग गरेर फाइदा उठाउनु हुनेछ । गर्न जति सजिलो छ त्यो भन्दा यसको फाइदा धेरै छ ।
मैले प्रत्यक्ष अनुभव लिएको छु । घर विहारमा पर्छ । सधै श्रीमतिलाई कुटने बाबुआमाको साथीहरूको कुरा सुनेर झगडा गर्ने यादवको परिवारलाई मैले यसरी बनाएर श्रीमानलाई खान देउ भनेर सल्लाह दिएको थिय उनले बनाएर खान दिइकी थिइन आज श्रीमतीको आज्ञाबिना उसले केहि गर्दैन ।
आउनुहोस् तान्त्रीक तरिका जानौं
१. आफ्नो बायाँ खुट्टाको जुता बराबरको गहुको पिठोको रोटी पकाएर आइतबार खान दिनु क्रमश: फाइदा देखिन थाल्दछ । यो शुद्ध तान्त्रीक क्रिया हो । यसमा मन्त्रको आवश्यक छैन ।
लक्ष्मी खुसी पारी पैसा तान्ने मन्त्र
बुटी बाधेर पनि के रोग निको हुन सक्ला त ?
← जनमत सर्वेक्षण – नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरुको बर्तमान कार्यशैलीप्रति तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मेरो देश नेपालले कहिले काचुली फेर्ला ? →
श्रीमानको भाग्य चम्काउने युवतीका लक्षणहरु
अप्रील 30, 2019 अप्रील 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
श्रीमान र श्रीमती वीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उपायहरु
मार्च 24, 2018 मार्च 24, 2018 साइन्स इन्फोटेक 9
अगस्ट 29, 2019 अगस्ट 29, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
तपाई उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने सुत्रहरु